Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » KISS frontman Gene Simmons: Anti-vaxxers bụ onye iro!
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • Entertainment • Akụkọ Ahụike • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Ndị na-agọnarị ịdị adị nke COVID-19 ma dị njikere ịgbasa nje a bụ ihe ọjọọ, “onye iro” nke ekwesịrị ịchọpụta ma kpughee ya.
Ndị na-ama ụma na-ekpughere ndị ọzọ n'ihe ize ndụ nke COVID-10 bụ 'ihe ọjọọ'.
A naghị ekwe ka ibunye onye ọ bụla n'ihi na ị chere na ị nwere ikike nke aghụghọ.
Okwu Simmons so na ndị ọhụrụ na-abịa site n'ogige ndị a ma ama na-egwu egwu ọgwụ mgbochi.
Gene Simmons, onye n'ihu nke otu egwu egwu Kiss, kparịrị anti-vaxxers ndị na-ama ụma na-ekpughere ndị ọzọ n'ihe ize ndụ nke ọrịa COVID-19.
Ndị na-agọnarị ịdị adị nke COVID-19 ma dị njikere ịgbasa nje a bụ ihe ọjọọ, Simmons kwuru, na-akpọ anti-vaxxers “onye iro” nke ekwesịrị ịmata ma kpughee.
"Achọghị ka ị bunye onye ọ bụla n'ihi na ị chere na ị nwere ikike nke aghụghọ," Kiss frontman kwuru.
Okwu a bilitere na 'TalkShopLive' ka Simmons na-ekwu maka 'KISS Kruise' kachasị ọhụrụ yana ka ndị Fans chọrọ isonye na otu ga-esi chọọ ugbu a. ọgwụ ogwu. O kwuru na ọ dịghị iche n'iwu ndị chọrọ ikenye eriri oche ma ọ bụ ịghara ise siga n'ụlọ.
Ihe ndị dị otú ahụ ka e nyere iwu “ọ bụghị n'ihi na ha chọrọ ịnapụ gị ikike - nke ahụ bụ n'ihi na ndị ọzọ n'ime anyị kpọrọ ya asị. Anyị achọghị ịnụ anwụrụ gị, "Simmons kwuru.
"Achọghị m ịnweta ọrịa gị," onye egwuregwu dị afọ 72 kwuru. "Achọghị m itinye ndụ m n'ihe ize ndụ naanị n'ihi na ị chọrọ isite n'ọkụ na-acha uhie uhie."
Ọ tụrụ aro ka ndị na-ajụ ọgwụ kwesịrị 'ịmata ma kpọpụta ya n'èzí.
Mara ndị enyi gị bụ na ha na-eche banyere gị. Nke ahụ gụnyere COVID-19, "Simmons kwuru. "Ọ bụrụ na ị dị njikere ịga ije n'etiti anyị n'enweghị ọgwụ mgbochi, ị bụ onye iro."
Okwu Simmons so na ndị ọhụrụ na-abịa site n'ogige ndị a ma ama na-egwu egwu ọgwụ mgbochi. Onye na-akwado ihe nkiri TV Britain na-ekwu okwu Piers Morgan gbawara ha na Fraịde dị ka "ìgwè p *** ies na-enweghị isi" na-erughị eru maka ndị nna nna ha nwere dike.
November 12, 2021 na 19: 43
Abụghị m onye mgbochi vaxxer. Agbanyeghị, echere m na echiche Mr Simmons ezighi ezi. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka mmadụ bụrụ onye iro onye iro bụ ndị na-enweghị uche bụ ndị na-agba ọgwụ mgbochi na-emeghị nchọpụta ọ bụla nke onwe ha ma na-eme ya nanị n'ihi na a gwara ha na ha kwesịrị. A na-egbochi Covid nke ukwuu naanị site n'ịkwado ọkwa vitamin D zuru oke. Ihe akaebe dị maka onye ọ bụla chọrọ ịchọ ya. Ọ na-egosikwa na ihe niile na-akpata ọnwụ dị elu maka ndị a gbara ọgwụ mgbochi ọrịa karịa ndị na-enweghị ọgwụ mgbochi. Na n'ikpeazụ ogwu anaghị enye gị mgbochi. Ya mere, ị nwere ike ibute ọrịa ma gbasaa ya ndị ọzọ na nke a bụ kpọmkwem ihe na-eme.